धरहरा कि स्वस्थ काठमाडौं ? - Sagarmatha TV
ब्लग धरहरा कि स्वस्थ काठमाडौं ? बिहिबार, फाल्गुन २०, २०७२ Author:डा. अरुणा उप्रेती, काठमाडौं धरहराको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो एक महिनाको तलब दिए रे । अरू मन्त्रीले पनि दिने रे । भूकम्पमा भत्केको धरहरालाई बनाउन यति आतुर नेताले जनताको घर बनाउन आतुरता नदेखाएको कारणचाहिँ के होला ? बुझिनसक्नु छ । ३० करोड रुपैयाँमा धरहरा ठडाएर यसले काठमाडौंको पुरातात्त्विक महत्त्वलाई बढाउँछ र ?
भत्किएको धरहराको भग्नावशेषहरूलाई सुरक्षित राखी वरिपरि पर्खाल लगाएर मानिसहरूलाई २०७२ सालको भूकम्पको ज्ञान र जानकारी दिने काम गरे भइहाल्छ । धरहराका लागि छुट्याइएको ३० करोडले काठमाडांै उपत्यकाभरि सुलभ शौचालय बनाएर १० करोड रुपैयाँचाहिँ ती शौचालयहरूमा पानी र व्यवस्थापन गर्नका लागि राखिदिए इतिहासमा सफाइको कथा लेखिने थियो ।
धरहराको सट्टा चर्पी बनाउने विचार मैले दिँदा पक्कै केही व्यक्तिले यसको मानसिक सन्तुलन गुमेछ भन्ठानेछन् । कत्तिले चाहिँ धरहरा र चर्पीको पनि के तुलना गर्नुपर्ने हो र भन्लान् ? कुनै व्यक्ति जसले काठमाडांैलाई सफा बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँछन्, काठमाडौंलाई स्वस्थ सहर बनाउनुपर्छ भन्ने विचार राख्छन्, सायद मेरो विचारमा सहमति जनाएर टाउको हल्लाउनेछन् ।
मानौं, एकछिन आवेशमा आएर धरहरा बनाउन पैसा उठ्यो रे । धरहरा पनि बन्यो रे । तर धरहरा वरिपरि कतै चर्पी नहुँदा घुम्ने मानिसहरू कहाँ जाने होला, शौचालय गर्न ? अनि त्यही धरहरा वरिपरिका कुनाकाप्चामा जहाँ पाइन्छ, त्यहीं ठडिएर पिसाब गर्न कुनै पुरुष, केटालाई एक सेकेन्ड पनि लाग्ने छैन । महिलाहरूले चाहिँ यसरी कुना—कुनामा उभिएर पिसाब फेरेको दृश्य अपवाद नै हुन्छ ।
सायद सामाजिक संस्कारले यसमा भूमिका खेलेको हुनुपर्छ । धरहरा ठडाउनेले काठमाडौंको गन्ध सुँघ्न नपाएको हो कि ? धोबीखोला, रुद्रमती, वागमतीको फोहोर नदेखेको हो कि ? बस स्टपहरूमा दिसाले भरिएका शौचालय नदेखेको हो कि ? ठाउँ—ठाउँमा फालिएका फोहोरको डंगुर नदेखेको हो कि ?
भूकम्पपछि काठमाडौंलाई व्यवस्थित नगर बनाउने भाषण गर्दै नथाक्ने नेताहरूले सार्वजनिक सुलभ शौचालयको व्यवस्था र पानीको सुविधा नदिइकन कुरूप काठमाडौंको रूप फेरिएला भनी कसरी कल्पना गरेका होलान् ? नेता, सांसद, मन्त्रालयका कर्मचारी कसैलाई पनि सार्वजनिक शौचालयको प्रयोग गर्न पर्दैन ।
किनभने उहाँहरूलाई गाह्रो भएपछि उहाँहरू चढ्ने मोटर ५ तारे वा ३ तारे होटलमा मोडिन्छ’, एककप कफीसँगै नेताले शौचालयभित्र पसेपछि हलुको महसुस गरेर होटल बाहिर निस्कने मौका मिलिहाल्छ । अनि किन सुलभ शौचालयको कुरा गर्नु र मन्त्रीले ? तर आफ्ना आसेपासे, अंगरक्षकलाई चाहिँ यस्तो समस्या पर्दा के गर्लान् भनी सोच्ने फुर्सद नै छैन ।
तर यदि विश्व बैंक वा त्यस्तै कुनै ठूलो पैसा दिनसक्ने विदेशी संस्थाले काठमाडांैमा एक अर्ब रुपैयाँ दिएर स्वस्थ्य सुलभ शौचालय बनाउन मद्दत गर्छौं भनी हस्ताक्षर गरे भने सायद त्यसको भोलिपल्टैदेखि नेता, सांसद, सरकारी कर्मचारीको मुखमा नै चर्पी र सुलभ शौचालय झुन्डिनेछ । चाहे सभापतिको लागि उठ्ने चुनाव होस्, चाहे प्रदर्शनीमा फेसन शोको रिबन काट्दा होस्, चाहे टिभीमा सुरक्षाबारे नेताजीले ‘चर्पी महायज्ञ’ कतै छुटाउनुहुने छैन ।
यदि उहाँहरूलाई रामायणको प्रवचन गर्न बोलाइयो भने पनि कसरी रामले वनमा सुलभ शौचालय बनाएर झाडापखालाबाट बचेका थिए । युद्धभूमिमा पनि बानर सेनाका लागि चर्पी बनाएर पानीको बन्दोबस्त गरिएकाले झाडापखाला, हैजा लागेन भन्ने वैज्ञानिक ज्ञान प्रस्तुत गर्नु हुनेछ । तसर्थ जतिसुकै राम्रो बंगला, महल, दरबार बनाए पनि त्यहाँ चर्पी भएन भने के हालत हुन्छ होला ? कल्पना गरौं त ।
सुदूर पश्चिम र कर्णाली अति सुन्दर छ भनी सबैले वर्णन गर्छन् । तर म त किन हो किन त्यहाँको सौन्दर्यभन्दा चर्पी नभएर गनाएको ‘आची’ र फोहोरको दृश्य बढी देख्छु । काठमाडौंको पनि म त्यही हालत देख्छु । अनेक थरीका पुरातात्त्विक महत्त्वका दरबार र मन्दिरले सजिएको काठमाडौंका बाटोमा हिँड्दा देखिएको फोहोरले कसरी ३० करोडको धरहराको औचित्य सावित गर्ला र ?
मेरो कुरामा विश्वास नलागे स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहिलो तलामा बसेर लामो सास लिनोस् । भित्र पस्दापस्दै मुतको गन्धले रन्थनिएर पिनासै निर्मूल हुनेगरी गन्ध आउँछ । सबै ठाउँमा सफा चर्पीको गीत बजाउने मन्त्रालयको यो हविगतले तपाईंको मनमा के विचार आउँछ ? अहिलेको धरहरालाई जतिसुकै सुन्दर पारे पनि काठमाडांैका सडकमा फालिएको फोहोर, आची, प्लाष्टिक, मुत आदिको मिश्रणले कसरी नयाँ धरहराको आनन्द लिने ? धरहरा नयाँ बनाएर त्यसको के औचित्य यदि सहर फोहोरमा गनाइरहेको छ भने ?
काठमाडौंवासीहरू आउनुस्, छलफल गरौं । पार्क, बस स्टेसन, प्रदर्शनी स्थल, वीर अस्पताल, स्वास्थ्य मन्त्रालय र योजना आयोगको तला—तलामा सफा चर्पी र पानीको व्यवस्था जरुरी छ कि जताततै फोहोर भएर बनाइएको ३० करोडको धरहराको जरुरत छ ? मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले जति भने पनि म एक रुपैयाँ पनि धरहरा बनाउन चन्दा दिनेछैन । बरु धरहरा वरिपरि चर्पी बनाउन कसैले सहयोग मागे चन्दा दिनेछु, तपाईं नि ?